प्रचण्डले जवाफ दिनै पर्ने ओलीका यस्ता ३ प्रश्नः जनयुद्धका घाइतेको उपचारदेखि सम्पति छानविनसम्म — Imandarmedia.com
ओलीको प्रतिवेदन पढेपछि आम रुपमा आफ्नै नेतृत्वमा भएको जनयुद्धका घाइतेका शरीरबाट गोली र छर्रा निकाल्न प्रचण्ड तयार नभएकै हुन् त ? आन्दोलनमा योगदान गरेकालाई पाखा लगाउँदै दलाललाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेकै हुन् ? के व्यक्तिगत सम्पति छानविनको लागि प्रचण्ड तयार छैनन् ? प्रचण्डमाथि प्रश्न उठेका छन् । यति गम्भीर प्रश्नको उत्तर प्रचण्डले कसरी दिन्छन् हेर्न बाँकी छ । भोलि सचिवालय बैठक पार्टी कार्यालयमा पुनः बस्दैछ ।